Jamaal Khaashuqji: Salaatul qaai'ib looga dukaday Sacuudiga iyo Turkiga - BBC News Somali
Jamaal Khaashuqji: Salaatul qaai'ib looga dukaday Sacuudiga iyo Turkiga
16 Nofembar 2018
Image caption Dad badan oo ka soo qayb galay salaadda janaasada oo loogu dukanayey Khashuqji masaajid ku yaallo Istanbul
Masaajidda ku yaalla Sacuudi Carabiya iyo Turkiga ayaa salaadda janaasada looga tukaday wariye Jamaal Khaashuqji ee la dilay.
Saalax jamaal oo ah wiil uu dhalay Khaashuqji ayaa ka qayb galay munaasabad aabbihii loogu duceynayey oo lagu qabtay magaalada Jiddah. Sida oo kale dad boqollaal ah ayaa ka soo qayb galay salaadda janaasada qaai'ibka oo Khashuqji looga tukaday Meka, Madiina iyo Istanbul.
Jamaal Khaasuqji oo 2-dii bisha October lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbuul waxaan weli waxaan war ah laga haynin meydkiisa halka uu ku dambeeyey.
Boqortooyada sacuudiga ayaa waxay sheegtay dilka Jamal amarkiisa inuu ka soo baxay xubno ka tirsan sirdoonka Sacuudiga balse Dhaxal sugahaha boqortooyada Amiir Maxammed Bin salmaan uu wax shaqo ah ku lahayn.
Raadka Jamaal Khaashuqji oo galay qasriga boqortooyada Sucuudiga
Madaxa CIA oo dilka Khaashuqji u faahfaahisay Trump
Turkiga: "Khaashuqji waa la ceejiyey, ka dibna waa la jarjaray"
Turkigana wuxuu ku adkeysanayaa amarka dilka Khaashuqjii inuu ka soo fulay madaxda ugu sarreysay boqortooyada Sacuudiga.
Waxaa maanta salaadda janaasada Sacuudiga iyo Turkiga looga dukaday Khaashuqji iyada oo aan meydkiisa weli la helin taasoo qoyska Khaashuqjii ay uga dhigan tahay in meydka Jamaal in la helo inaan rajo badan laga qabin.
Image caption Dad badan oo ka soo qayb galay munaasabadda looga duceeynayey Khaashuqji oo Istanbul lagu qabtay
Image caption Imaam dadka tujinaya salaadda qaa'ibka ee Khaashuqji Istanbul looga dukaday
Magaaladda Jidda waxaa lagu qabtay munaasabad baroordiiq ah oo lagu casuumay iney ka soo qayb gasho cid kasta oo dooneyso iney qoyska Khaashuqji u tacsiyeyso.
Image caption Saalax Khaashuqji oo qaabilay dadka uga tacsiyadeynaya geerida aabbihii
Bishii hore Saalax Jamaal oo ah nin Sacuudiga u dhashay dhalasha Mareykanna haysta wuxuu magaalada Riyadh uu kula kulmay Boqorka Sacuudiga boqor Salmaan iyo Dhaxal sugaha Amiir Maxammed bin-Salmaan iyaga oo qoyska Khaashuqji u tacsiyadeeyey.
Marki xayiraadda safarka ee saarneyd Saalax laga qaadayna wuxuu u safray Magaalada washington. Xilli uu ku sugnaa Mareykankana wuxuu CNN uu u sheegay inuu doonayo iney aabbihii ku aasaan Madina marka meydkiisa la helo.
Saalax wuxuu intaa raaciyey "waxaan dooneynaa inaan aabbahey si sharaf iyo maamuus leh u aaso".
Gabadha uu Khaashuqji guursan lahaa Hatice Cengiz, mar sii horreysay waxay BBC-da u sheegtay waayitaanka Jamaal Khaashuqji iney uur ku taallo ku abuurtay "xitaa ay ismacasalaameynin marki ay kala tageen ee isugu dambeysay" ilaa iyo haddana dhimashadiisa ay u qaadan la'dahay.
Waxayna intaa raacisay "haddii uu qof dhinta dhimashadiisa waxaad kaga sabreysaa meydkiisa oo aad aragto oo aad aasato" balse taa ma dhicin.
Gabadha uu guursan lahaa Khaashuqji: "xitaa isma macasalaameynin"
Sida oo kale waxaa la qorsheynayaa munaasabado looga duceynayo khaashuqji in lagu qabto magaalooyinka Washington, London iyo Paris.
Arrintani ayaa waxay imaneysa maalma un kaddib marki uu magaalada Riyaad uu shir Jaraa'id ku qabtay ku xigeenka dacwad oogaha Sacuudi Carabiya , Shalaan bin Rajih Shalaan, uuna sheegay in Meydka Khaashuqji lagu dhex jarjaray qunsuliyadda Istanbul markii uu dhintay.
Sacuudiga oo shaaciyey dadkii dilay Jamaal Khaashuqji
Amiirka Sucuudigu ‘wuxuu sheegay in Khaashuqji uu halis ahaa’
"Khaashuqji ayaa lagu duray cirbad sun ah, kadib markii uu gacan ka hadal ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, 2dii Oktoobar" ayuu ku sii daray.
Wuxuuna dacwad ku soo oogay 11 qof oo uu ku eedeyey dilka, wuxuuna maxakamadda vweydiistay in 5 ka mid ah dil lagu xukumo.
Kiiska ayaa loo wareejiyey maxkamad, halka baaritaanka 10 kale oo la tuhunsanayaal ahna la sii wado.
Image caption Ku xigeenka dacwad oogaha Shalaan bin Rajih Shalaan,
Mr Shalaan ma uusan sheegin magacda shaqsiyaadka uu dalbaday in xukun dil ah lagu fuliyo.
Khaashuqji oo wargeyska Washington Post ku lahaa maqaal billa ah ayaa la waayey xilli uu qunsuliyadda dalkiisu uu ku leeyahay Istanbuul u raadsaday waraaqo la xiriiro guurka.
Saraakiisha Turkiga ayaa waxay ku adkeysanayaan dilka Khaashuqji inuu ahaa mid qorsheysan ayna fuliyeen xubno ka tirsan sirdoonka Boqortooyada Sacuudiga.
Image caption Waxaa loo arkaa Maxamed Bin Salmaan inuu yahay ninka wakhtigan ugu awoodda badan Sacuudiga
Amir Maxamed, wiilka boqor Salmaanka Sacuudiga, ahna ninka la aaminsan yahay inuu Sacuudiga xukumo, ayaa beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa "dilka naxariis darrada ah oo aan sinnaba qiilka loogu samayn karin" ee loo geystay Wariye jamal Khaashuqji.